सिर्जनालाई खेलाई खेलाई मा र्यो भन्दै माईतीहरू मिडियामा। सुमन क्षेत्रीको नाटकी प्रेम | (भिडियो हेर्नुस्) – Khabar28media
सिर्जनालाई खेलाई खेलाई मा र्यो भन्दै माईतीहरू मिडियामा। सुमन क्षेत्रीको नाटकी प्रेम | (भिडियो हेर्नुस्)
August 10, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
सिर्जनालाई खेलाई खेलाई मा र्यो भन्दै माईतीहरू मिडियामा। सुमन क्षेत्रीको नाटकी प्रेम | (भिडियो हेर्नुस्) सिर्जनालाई खेलाई खेलाई मा र्यो भन्दै माईतीहरू मिडियामा। सुमन क्षेत्रीको नाटकी प्रेम | (भिडियो हेर्नुस्) यो समाचारलाई अन्तिममा राखिएको छ पुरा हेर्नुहोला, यो अर्को खबर पनि पढ्नुहोस् !!
भोलि हुँदैछ ग्रहचक्रमा परिवर्तन, यी चार राशिलाई धेरै अशुभ ! समस्त भौतिक सुखको कारक ग्रह मानिने शुक्रले साउन २७ गते राशि प्परिवर्तन गर्दैछ। साउन २७ गते बुधबार शुक्र बिहानको ११ बजेर ३५ मिनेट पश्चात सिंह राशि छाडेर कन्या राशिमा प्रवेश गर्नेछ।शुक्र कन्या राशिमा प्रवेश गर्दा सम्पूर्ण राशिलाई असर पर्नेछ।
१२ राशि मध्ये केहिलाई शुक्रको राशि परिवर्तनले शुभ प्रभाव पार्नेछ भने केहिलाई अशुभ प्रभाव पर्नेछ। समस्त भौतिक सुखको कारक ग्रह मानिने शुक्रले साउन २७ गते राशि प्परिवर्तन गर्दैछ। ज्योतिषीहरुका अनुसार निम्न राशिलाई शुक्रको राशि परिवर्तनले नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
शुक्रको राशि परिवर्तनसँगै शुक्र मेष राशिको शत्रु वा रोग भावमा रहनेछ। यस्तो हुँदा मेष राशि हुनेहरुमा स्वास्थ्यको समस्या बढ्नेछ। खान-पानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। पाचन सम्बन्धि तथा श्वास-प्रश्वास सम्बन्धि समस्या देखा पर्न सक्ला। साथै शुक्रका कारण शत्रु पनि हावी हुनेछन्।
अरुको षड्यन्त्रमा नपरियोस् भन्नको लागि विवेकको प्रयोग गर्नुहोला। दाम्पत्य जीवनमा पनि समस्या पैदा हुन सक्लान्। साना-साना कुरामा विवाद हुनेछ। आर्थिक लेनदेनमा पनि शुक्रको नकारात्मक प्रभाव रहन सक्ला।
शुक्र वृष राशिको पाँचौं स्थानमा रहनेछ। शुक्रको राशि परिवर्तन वृष राशि हुनेहरुका लागि खासै शुभ रहने देखिँदैन। विद्यार्थीहरुका लागि शुक्रको राशि परिवर्तन खासै लाभप्रद रहनेछैन। अध्ययन रूची घट्नेछ भने प्रतिष्पर्धाहरुमा पछि पर्ने सम्भावना रहेको छ। नीति नियम लागू गर्ने मामलामा
पनि शुक्र बाधक बन्न सक्ला। शुक्रको नकारात्मक प्रभाव कार्यस्थलमा समेत पर्नेछ। महत्वपूर्ण कार्य असफल हुँदा मन विचल्लित हुन सक्ला। सकेसम्म नयाँ कार्यमा लगानी पनि नगरेकै राम्रो होला।
शुक्रको राशि परिवर्तन कन्या राशि हुनेहरुका लागि खासै सुखद देखिँदैन। शुक्रको राशि परिवर्तन सँगै आलोचना बढ्नेछ। आफ्नै भनिएकाहरु विरुद्धमा लाग्नेछन्। सोचेजस्तो नहुँदा मानसिक रुपमा तनाव बढ्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा सन्तुष्टिको कमी हुनेछ। यात्राको अवसर जुरेपनि काम सफल हुनेछैन।
आम्दानी र खर्चमा तालमेल नहुँदा आर्थिक समस्या पैदा होला। परिवारमा शुक्रका कारण तनाव बढ्न सक्ने देखिन्छ।
सप्तम भावमा शुक्रको राशि परिवर्तन हुँदा मीन राशि हुनेहरुको दाम्पत्य जीवन अथवा प्रेम जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। सामान्य भन्दा सामान्य कुरामा समेत परिवारमा कलह बढ्न सक्ला। मिहिनेत अनुसार लाभ नमिल्दा जाँगर हराउनेछ। साझेदारीमा गरिएका व्यवसायले सबै भन्दा बढी तनाव दिनेछ। कानुनी रुपमा पनि समस्या बढ्न सक्ला। बोलि तथा व्यवहारमा नियन्त्रण नहुने होला भने आफन्तजनसँगको सम्बन्धमा दरार आउनेछ।
Previous Article देशभरका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका लागि अत्यन्तै खुशीको खबर, हेर्नुस् कती बढ्यो तपाईंको तलब ?
Next Article लाइसेन्स निकाल्ने तयारीमा हुनेहरुको लागि आयो सोच्दै नसोचेको खुसीको खबर।